Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa qasabadaha nooca jikada-Jikada, Qasadaha Buuxi Weelka, Qolka Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa nooca qasabada
Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa nooca qasabada
2020 / 10 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 6381 0
Ed Qiimee: Waxaan ka hawlgalayaa lambarada qashin-qubka cusub waxaanan u kuurgalay inaan kala dooran karo qasabad laba taabasho ah oo “baahsan” ah ama qasab ah “centre”. Ma waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo u dhexeeya qaar ka mid ah qasabadahaan si ay iiga caawiyaan xulashadayda?
Ted, gobolka New York
Qiimaha Ted: Qasabadaha Centerset waa sagxad lagu rakibay 4 inji inta u dhexeysa qabashada. Qasabadaha baahsan waxay ka kooban yihiin qaybo kala duwan guriga dhexdiisa inta u dhaxaysa laga yaabo inuu dhinac u jiro 8 ilaa 16 inji. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanta weyn waxay noqon kartaa qiimaha dheeraadka ah ee u dhexeeya gelinta qasabad balaastig ah oo balaaran oo ku saabsan qasabadda xarunta. Qiimayaashan ayaa go'aan ka gaari kara nooca aad doorato.
Qaar ka mid ah qiimayaasha dheeraadka ah ee xoogga la saarayo ayaa ah: Qasabadaha baahsan ayaa laga yaabaa inay ka jecel yihiin si fudud si ay u iibsadaan tubbada lafteeda. Intaa waxaa sii dheer, qasabadaha baahsan awgood waxaa lagu bixiyaa waxyaabo kala duwan, qiimaha shaqada ayaa sidoo kale ka weynaan kara in la dhigo. Ugu dambeyntiina, gaar ahaan qashin-qubka wasakhda ama dabaqyada miisaska ayaa sidoo kale la doonayaa. Laynka dambe: Tuubbada sibraariga ee baahsan ayaa ku siin karta saameyn naqshadeyn ah, halka tubada xaruntu ay ku siin karto keyd dhaqaale!
Ed Qiimee: Waxaa laygu ballamiyay geedi socod caafimaad dhawr bilood gudahood iyo musqusha ka dheer ayaa laga yaabaa inay i caawiso halkaan caafimaad ka helayo. Maaddaama aan jeclaan lahaa suuli cusub oo cusub, suuliga sare miyay la mid noqon doontaa tuubadeyda, tanina dhibaato ma ku noqon doontaa xiriirada kala duwan?
Qiimeeye Steve: Qolka musqulaha ugu sarreeya ee qalbi qaboojintu waxay isu beddeleen moodo.
Marka hore, waxaan jeclaan lahaa inaan heerka sare gaadho musqusha ugu sarreysa ugu sarraysa waxay la mid tahay kursi qolka cunnada caadiga ah. Markaa maaha isbeddel culus oo ka yimaada musqusha caadiga ah, kaliya laba inji ama wax ka weyn ayaa ka dhigaya waxoogaa fudud shaqsiyaad badan inay ka baxaan oo ka baxaan musqusha.
Sababtoo ah kala duwanaanshaha naqshadeynta yar, ujeeddooyinka adeegsadayaasha badan ayaa laga yaabaa inaysan dhibaato ahayn, hase yeeshe diiradda saar xirfadleyda iyo qasaarooyinka dhammaan dadka ay khuseyso ka hor inta aan la rakibin musqusha ugu sarreysa.
Ka hadalka aasaaska, qalbi qaboojinta musqulaha ugu sarreeya waa inay u dhigmaan isku xirnaanta isku midka ah musqulaha caadiga ah waxaana laga heli karaa fijaanno wareegsan iyo dherer ah.
Ugu dambeyntiina, qaab-dhismeedka ugu sarreeya ee qalbi qaboojinta ayaa laga heli karaa inuu kaa caawiyo sidii aad lug kuugu siin lahayd badbaadinta biyaha sida ugu wanaagsan.
Qandaraaslaha Grasp / Plumber Ed Del Grande waxaa loo fahmay si caalami ah maxaa yeelay abuuraha buuga e "Magaca Ed Del Grande ee Hoyga", martigaliyaha TV-yada iyo Websaydhada, iyo shirkad LEED oo aan khibrad lahayn.
Hore:: Is-waafajinta jilicsan ayaa u timid Nolosha Kintsu (TM) Tubbada kala-soocidda ee Brizo Next: 10ka Tuug ee Ugu Fiican Filtarrada 2020
2021 / 02 / 04 3415
2021 / 02 / 03 3744